Fooliin afaanii badaan maalin dhufa? – Fana Broadcasting Corporate
Fooliin afaanii badaan maalin dhufa?
Finfinnee, Fulbaana 15,2011(FBC) – Foolin afaanii badaan maalin dhufa? Furmaanni isaahoo?
1. Qulqullina afaan keenyaa guyyaa guyyaatti eeggachuu yoo baanne
Nyaanni afaan keenya keessatti hafu ilkaan gidduu fi arrabarratti yeroo muraasa booda baakteeriyaa horuudhaan foolii afaan keenyaa balleessuu danda’a.
2. Dhukkuboota irga ilkaanii fi oorii ilkaanii
Keemikaalota baakteriyaarraa gadi lakkifamaniin yoo ilkaani fi irgi ilkaanii keenya miidhame. Keemikaalotni baakteeriyoota kanneenirraa gadi lakkifamu ilkaani fi foon ilkaanii irratti boolla uumuun yoo yaalamuu baanne, ittuma fufiinsan kan miidhaa geessisanii fi qulqulleessuu qofaan kan hin dhaabbanne ta’an.
3. Goguu afaanii
Hancufni afaan keenya keessatti oomishamu afaan foolii gaarii akka qabatuuf gahee guddaa taphata. Kanas kan godhu asiidii baakteeriyootan uumaman callabbeesuu fi seelota du’an afaan keessaa dhiqee baasuudhaani.
Afaan kan goguu danda’u sababa adda addaa kanneen akka “side effect” qorichoota dhukkuba biraaf fudhatamanii ( antihistamines, diuretics and others), yeroo dheeraaf funyaaniin dhiisanii afaaniin harganuu, dhuukkuba xannacha hancufaa fi kan biraa ta’uu danda’a.
4. Dhukkuboota qaama keessaa
kanneen akka, infeekshinii qaama hargansuu ( pneumonia, bronchitis), infeekshinii saaynasii (sinusitis), toonsilii (tonsillitis), fi kkf.
5. Tamboo xuuxuu (smoking tobacco)
Araada tamboo xuuxuu yoo qabaanne foolin afaan keenyaa alaalaa nama ari’a.
Guyyaa guyyaatti yoo xiqqaate altakka ilkaan keenya saamunaa ilkaaniitiin qulqulleeffachuu.
Ilkaan keenya ganama ganama osoo hin taane galgala galagala osoo qulqulleeffannee gaariidha.
Nyaanni guyyaa nyaatame, hafteen isaa halkan afaan keenya keessa akka hin bulle jechuudha.
Yeroo qulqulleeffannu bruushti nuti itti fayyadamnu, ilkaan irra keessa qulqulleessa malee ilkaan gidduu waan hin seenneef, fo’aa ykn kirrii qal’oo harka keenya lamaaniin gamaaf gamana ishii qabnee ilkaan gidduudhaa nyaata ittiin baasuu qabna.
Arraba keenya qulqulleeffachuu dagachuu hin qabnu. Namoonni baay’en ilkaan malee afaan akkamiin qulqulleeffama jedhu.
Haata’uutii waan qara hin qabneen gubbaa arraba keenyaa suuta haquu dandeenya. Duubni bruusha ilkaaniifaa kanaaf iddoo qaba.
Bruusha ittiin ilkaan qulqulleeffannu yoo xiqqaate ji’a lama keessatti altakkaa jijjiiruu qabna.
Afaan keenya akka hin gogne haancaa/maastikaa (gum) kan sukkaara of keessaa hin qabne alanfataa deemuu.
Yoo “side effect” ( miidhaa cinaa) isinirraan qorichoota dhukkuba biraaf kennamaniitu fide ta’e, osoo deemnee ogeessa fayyaa jalqaba qoricha sana nuuf ajaje hin haasofsiin qoricha addaan kutuun gonkuma sirrii miti.
Yoo kana hunda gootanii, foolin afaanii badaan isinirraa baduu dide, mana yaalaa deematii ilaalamaa.
Gorsaan; Dooktar Gurmeessaa Hinkoosaa
Milkaa’ina sagantaa ekisteeshinii fayyaa hawaasaaf hunduu gahee irraa eegamu…
Oromiyaan dhibee koleeraa ittisuurratti hojjechaa jira
Talaalliin koleeraa afaanin kennamu, eegalameera
Abbaan taayitichaa oomishaalee acheettoo 6 irratti tarkaanfii sirreeffamaa fudhate
Tokkummaa, walabummaa, faayidaa waaraa fi kabajaa…
Manni Maree Naannoo Tigraay har’aa eegalee guyyootii 3f…
Chaayinaa Choongichiingii gara Finfinneetti balaliin…
Ityoophiyaa fi Jarman koomiishinii waloo hundeessuuf…